International Yemagweta magweta muNetherlands - Law & More
Kuvanzika ikodzero yakakosha uye inobvumira vese vanhu nemakambani kudzora yavo data. Nekuda kwekuwedzera kwemitemo yeEuropean neyemunyika nemirau uye kudzora kwakasimba pakuteedzerwa nevatariri, makambani nemasangano hazvitombo kufuratira mutemo wepamoyo mazuva ano. Muenzaniso unonyanya kuzivikanwa wemitemo nemirau inofanirwa kutevedzwa nekambani yega yega kana masangano ndeyeGeneral Data Protection Regulation (GDPR)…
Kuvanza ikodzero yakakosha uye inobvumira vese vanhu nemakambani kudzora data ravo.
> Rudzi rwekushandisa uye kutarisisa
> Inventory uye mutemo wekuvanzika
Nekuda kwekuwedzera kwemitemo neEuropean yenyika pamwe nemirairo uye zvakadzama kudzora pakuteverwa nevatariri, makambani uye masisitimi haakwanise kufuratira mutemo wekuvanzika nhasi. Muenzaniso unonyanyo kuzivikanwa wemitemo nemirairo iyo ingangoita chero kambani kana institution inofanirwa kutevedzera iyo General Data Kudzivirirwa Regulation (GDPR) yakapinda musimba muEuropean Union. MuNetherlands, mimwe mirawo yakaiswa pasi muGDPR Implementation Act (UAVG). Musimboti weGDPR uye UAVG inhema mune chokwadi chekuti kambani imwe neimwe kana sangano rinogadzira ruzivo rwega rwega runofanira kubata idzi data nehungwaru nokungwarira.
Kunyangwe kugadzira kambani yako GDPR-chiratidzo chakakosha, asi zviri pamutemo zvakaoma. Kunyangwe iyo ine chekuita nevatengi data, yevashandi data kana data kubva kune wechitatu mapato, iyo GDPR inomesa zvinodiwa zvakaomarara maererano nekugadzirisa kwega data uye inosimbisawo kodzero dzevanhu vane data rakagadziriswa. Law & More magweta anoziva nezvese zvinoitika nezve (mutemo inogara yakavanzika) yemutemo. Magweta edu anofungisisa nzira yaunobata nayo wega data uye mepu kunze kwako mukati maitiro uye dhata kugadzirisa. Magweta edu anotarisisa kuti kambani yako yakanyatso kurongeka zvakaringana nemutemo unoshanda weAVG uye izvo zvinogoneka kugadziridzwa. Nenzira idzi, Law & More inofara kukubatsira iwe kugadzira uye chengeta yako GDPR-chiratidzo.
Nekuunzwa kweAVG, mitemo yakasimbiswa. Kambani yako yakagadzirira izvi?
Isu tinokubatsira kugadza Dhivha Dziviriro Officer
Dziviriro Yekudzivirira Kwekuita Kwemhedzisiro
Isu tinokwanisa kuitisa ongororo yekuona njodzi dzakanangana nekugadzirisa kwako data
Ndeipi data iyo kambani yako inogadzira? Inogadzirisa paAVG? Isu tiri pabasa rako
“Munguva yesumo iyo
pakarepo zvakajeka kwandiri
kuti Law & More ane
hurongwa hwakajeka hwekuita ”
Rudzi rwekushandisa uye kutarisisa
Iyo GDPR inoshanda kune ese masangano anogadzira data rako pachako. Kana kambani yako ichiunganidza data inogona kuzivikanwa nemunhu, kambani yako ine chekuita neGDPR. Uyezve, data rako pachako rinogadziriswa apo, semuenzaniso, kubhadhara kwevashandi kwevashandi vako kuchichengetwa, kugadzwa kune vatengi kunyoreswa kana kana data muhutano hwehutano huchinjaniswa. Iwe unogona zvakare kufunga nezvemamiriro anotevera: kuitisa mabasa ekushambadzira kana kuyera kana kunyoresa kugadzirwa kwevashandi kana kushandiswa kwemakomputa. Tichifunga nezvezviri pamusoro, hazvigoneki kuti kambani yako ichafanira kubata nemutemo wekuvanzika.
MuNetherlands, nheyo yekutanga ndeyekuti munhu anofanirwa kukwanisa kuvimba nemakambani uye masangano kubata data ravo nekuchengetedza. Mushure mezvose, munharaunda yedu yazvino, digitization inoita basa rinowedzera uye inosanganisira kugadzirisa data mune yedhijitari fomu. Izvi zvinogona kutitungamira munjodzi dzakakura nezvekuchengetedza kwedu kuvanzika. Ndokusaka mutariri wechivande weDutch, iyo Dhijitari Dziviriro Dziviriro (AP), aine masimba anosvika kure nekudzora uye ekumanikidza. Kana kambani yako isingateedzere mutemo unoshanda weGDPR, inokurumidza kuisa njodzi kumuripo wekubhadhara nguva nenguva kana mubhadharo wakakura, unogona kusvika pamamirioni mazana maviri emadhora. Uye zvakare, mune chiitiko chekusava nehanya nekushandisa wega data, kambani yako inofanirwa kufunga nezvekuipa kwakasarudzika kwakashata uye nekubhadharira zviitwa nevanotambura.
Inventory uye mutemo wekuvanzika
Kuti udzivise zvinosvika kure zvakanyanya kana matanho kubva kumukuru wevatariri, zvakakosha kuti kambani yako kana masangano ave neyakavanzika mutemo kuti iteerere GDPR. Usati wanyora mutemo wekuvanzika, zvakakosha kuti uwane maitiro ayo kambani yako kana sangano riri kuita mukati mezvakavanzika. Ndokusaka Law & More akagadzira inotevera danho-nhanho chirongwa:
• Step 1: Ziva kuti ndeipi data rako chaunoverenga
• Step 2: Tarisa chinangwa uye hwaro hwekugadziriswa kwedata
• Step 3: Tarisa uone kuti kodzero dzezvidzidzo zve data dzakasimbiswa sei
• Step 4: Ongorora kana uchikumbira uye uchiita, uye uchiita mvumo
• Step 5: Tarisa kuti iwe unosungirwa here kuita Dziviriro Yekudhinda Impact Kuongorora
• Step 6: Sarudza kuti ungagadza here Dziviriro Dziviriro
• Step 7: Tarisa kuti kambani yako inobata sei pakuburitswa kwe data uye chisungo chekubika
• Step 8: Tarisa zvibvumirano zvako zve processor
• Step 9: Sarudza kuti ndeupi anotarisira sangano rako rinowira pasi
Paunenge waita ongororo iyi, zvinokwanisika kuona kuti ndeipi njodzi dzekutyorwa kwemitemo yekuvanzika inomuka mukati mekambani yako. Izvi zvinogona zvakare kufungidzirwa mune yako sirivha mutemo. Uri kutsvaga rutsigiro mukuita uku? Ndokumbirawo mubate Law & More. Magweta edu inyanzvi mune zvemitemo yekuchengetedza zvakavanzika uye anogona kubatsira kambani yako kana chinzvimbo neanotevera masevhisi.
• Kupa kuraira uye kupindura mibvunzo yako yepamutemo: semuenzaniso, pane rinoputsa dhi data uye unoita sei naro?
• Kuongorora kugadzirisa kwako kwedata pane hwaro hwezvinangwa nenheyo dzeGDPR uye kuona nenjodzi dzakatarwa: kambani yako kana kambani inoteerana neGDPR uye ndeapi matanho emutemo auchiri kutora?
• Kugadzirira uye kuongorora zvinyorwa, seyako yekuchengetedza zvakavanzika kana zvibvumirano zve processor.
• Kuitisa Dziviriro Yekudzivirira Impact Ongororo.
• Kubatsira mukutora kwemutemo uye maitiro ekumanikidza neAP.
• Panguva ino, mutemo wekuvanzika unoshandurwa shanduko huru kubva mukuitwa kweGDPR. Nekutanga kweGDPR, iyo yese European Union ichave pasi pemutemo wakavanzika mumwe chete. Izvi zvinokanganisa mabhizinesi zvakanyanya, sezvo vachizosangana nematambudziko akanyanya pamusoro pekuchengetedza data. Iyo GDPR inosimudzira nzvimbo yezvidzidzo zve data nekuvapa kodzero itsva nekusimbisa kodzero dzayo dzakatangwa. Uyezve, masangano anogadzira data rako pachako anenge aine zvimwe zvinosungirwa. Izvo zvakakosha kumakambani kuti agadzirire shanduko iyi, kunyanya kubva pazvirango zvekusaenderana neGDPR zvakare zvichaomarara.
Iwe urikuda zano maererano neshanduko kuGDPR? Iwe unoda here kuti kuve nekutariswa kunoitwa, kuve nechokwadi chekuti kambani yako inoenderana nezvinodiwa zvinobva kuGDPR? Kana iwe une hanya here nekudzivirirwa kwega yako data data haina kukwana? Law & More ine ruzivo rwakakura pamusoro pemutemo wekuvanzika uye ichakubatsira iwe kuronga sangano rako nenzira inoenderana neGDPR.